गाउँ गाउँ मा सिँहदरबार नभइ सिँह पसेको अनुभुति – Mero Pradesh TV
गाउँ गाउँ मा सिँहदरबार नभइ सिँह पसेको अनुभुति
पाठकको आँखामा लोकतन्त्र
आज १४ औं लोकतन्त्र दिवस जनताकालागी कति सार्थक ? र कति निरथक भए ? भनेर यो लकडाउनको बेलामा एक्लै घरमा सोचेर मनन गर्ने दिन आएको छ । राजाको शासन सत्ताको तित्तो स्वाद चाँखेका नेपाली जनताले लोकतन्त्रको पनि मिठो अनुभुति गर्न पाएन्न ।
लोकतन्त्र नेताहरूलाइ मात्रै आएको भनी व्यापक जनगुनासो बढ्न थालेको छ । जनताले राजा फालेर आफूले चुनेका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नै मात्र स्वार्थ पुरा गरेको जनताको ठम्याइ छ ।
जनता झन झन गरीब र नेता झन झन मोटाउदै गएको लोकतन्त्रले स्वतन्त्रता त दियो तर त्यस स्वतन्त्रताको गलत अर्थ लगाएर अपराधिहरु निर्वाध रुपमा अपराध गरिरहेका छन् । अपराधिहरुको संरक्षण तिनै सरकारमा बस्ने उच्च कोटिका नेता भनाउदाहरुले गरिरहेको छ । नेपालमा कोरोना जतिकै कहर जनप्रतिनिधिहरु रहेको भन्दै जनताले विभिन्न माध्यमबाट आक्रोस पोखिरहेका छन् ।
जनताले वास्तविक रूपमा लोकतन्त्रको अनुभुति लोकतन्त्र स्थापना भएको १४ वर्ष बिति सक्दा समेत पाउन सकेका छैनन । देश अहिले कोरोनाको कहरमा लामो समय लकडाउनमा छ यस्तो अवस्थामा दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने जनताले भोकभोकै बस्नु परेको छ ।
सरकार खान नपाएकाे जनतालाइ राहत बाड्ने ज्ञानेन्द्र शाहीलाइ राहत बाड्न राेक लगाउछ र उसलाइ थुन्ने आदेश दिन्छ । के सरकार लाेकतन्त्र तिम्राे ससुरालीले तिमीलाइ बिहेमा दिएकाे पेवा धन हाे र ? लाेकतन्त्र भाेकभाेकै मरिरहेकाे नेपाली जनता,मजदुर,गरीब,किसान र निमुखाकाे हैसियत भन्दा माथि छ र ?
जनताका जनप्रतिनिधिहरूले बांडेको खाद्य पदार्थ कुहिएको र खान अयोग्य भएको छ । पार्टी फुटाउने अध्यादेश रातारात ल्याउन सक्ने सरकारले जनताको स्वास्थ्य , सुरक्षा र खानपानमा गम्भीर लापरबाही गरेको टिप्पणाी सामाजिक सञ्जालमा बेग्राल्ती भेटिन्छ । गाउँ गाउँ मा सिँहदरबार नभइ गाउँ गाँउमा सिँह पसेको अनुभुति जनताले अहिले गर्न थालेका छन् । नेपाली राजनिती र जनप्रतिनिधिहरू प्रति जनताको आक्रोस र निराशा दुवै थरी प्रतिकृया भेट्न सकिन्छ ।
अहिलेको परिवेशमा यौटा नेपाली उखान ‘सोझालाइ सुली र बाङ्गालाई फुली’ भन्ने निकै समय सान्र्दभिक हुन्छ, जनताले न्याय र उन्मुक्ति पाउन छाडिसकेको यस्तो अवस्था यदि अझै रहिरहने हो भने एकदिन नेताहरुको दुइचार झोले बाहेक सबै सडकमा उत्रिएर यिनको शासन सत्ता पनि फाल्छन् । त्यसैले होसियार हुनु जरुरी छ ।
लोकतन्त्रको दिगोपन र स्थायित्वकोलागी अब सबै नेताहरुले सोच्नु पर्ने दिन आएको छ आफ्नालागी नभइ जनताको गाँस,बास र कपास,स्वास्थ्य र शिक्षाको लागी लड्नु पर्ने छ । यस्तो भएमा मात्रै लोकतन्त्र चिरस्थायी हुनेछ ।
जय लोकतन्त्र दिवस
७५ वर्षीया वृद्धा ११ दिनदेखि बेपत्ता
बर्दिवास प्रहरीले गर्याे अवैध घरेलु मदिरा नष्ट
महेन्द्रनगर बम बिस्फोट घटनाका मृतकलाई ३ लाख र घाइतेलाई डेढ लाख दिने प्रदेश सरकारको निर्णय